Coral Cactus: Na-eto Frankenstein nke ụwa Succulent - Cacti & Succulents
Coral Cactus: Na-eto Frankenstein nke ụwa Succulent
Isi Coral kaktus
All Banyere Coral kaktus
Nlekọta Coral Cactus
Grafting A Coral kaktus
Nsogbu Coral Cactus
Ọ bụrụ na anụ mmiri Frankenstein ga-ewere ọrụ ugbo, ọ nwere ike ịhụ kakpapa ka ọ bụrụ osisi kachasị amasị ya.
Ngwakọta nke ụdị dị iche iche dị iche iche na-eto eto n'otu osisi pụrụ iche na-adọrọ adọrọ ịhụ. Dabere na elu crest, ọ nwere ike na-akwado nke na-acha ọcha, ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, ma ọ bụ odo odo ruffled succulent uto n'elu ihe yiri a ọkara-green 'azuokokoosisi'.
Ma kaktus a abụghị n'ezie kaktus ọ bụla, ma ọ bụrụ na a na-emeso ya dịka nke ọ nwere ike ibute nsogbu. Ka anyi choputa ihe Cactus-nke-a adighi-achoghi nke Frankenstein kwesiri idi ndu ma nwekwaa obi!
Ezi Ngwaahịa Maka Treatgwọ Coral Cactus Nsogbu:
70% Mmanya Na-egbu Mmanya
Were Mmanụ (jide n'aka na itughari)
‘Dị ‘White Ghost’ nke murukpọ dị iche iche.
Aha Aha Coral cactus, crested euphorbia, candelabra osisi, canstla candelabra plant, crested elkhorn
Aha sayensị Euphorbia neriifolia base with graup Euphorbia lactea crest
Ìhè Anyanwụ juputara na ndo
Mmiri Mmiri mgbe ala kpọrọ nkụ 2-4 ”miri emi
Okpomọkụ 60-85 ogo ezigbo
Iru mmiri Na-amasị iru mmiri na ezi airflow
Ala Kaktus ite
Fatịlaịza Diluted edozi mmiri mmiri fatịlaịza
Pests Mealybugs, ọnụ ọgụgụ ụmụ ahụhụ, site na mgbe ụfọdụ, ududo, àjà
Ọrịa Powdery mildew, nwere ike ịdaba mgbọrọgwụ ire ere ma ọ bụ ihe ndị ọzọ fungal na ọnọdụ ụfọdụ
Euphobria lactea, ahịhịa nke mebere oghere coral cactus.
Site na mmalite ya n'Africa, Euphorbia genus bụ ezinụlọ ịtụnanya na-eju anya nke nwere ihe karịrị ahịhịa ahịhịa 2000. A na-akpọkarị 'spurges', a maara ha maka sap na-egbu egbu, nke a na-akpọ latex, bụ nke a na-ejikarị eme ihe dị ka purgative.
Ma coral cactus bụ n'ezie ụdị Euphorbias dị iche iche n'otu oge, nke mere ka ọ dịkwuo mgbagwoju anya.
Isi ya na-abụkarị Euphorbia neriifolia, osisi nke na-adị ka cactus-dịka ma e wezụga maka akwụkwọ ya, oval epupụta. Ọ bụ ezie na a na-eji ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ eme ihe n'oge a, nke a bụ nke kachasịkarị n'ihi na ọ na-eto eto.
Ma anyadokwa n'elu ga-a crest si a dị iche iche osisi. Nke a bụ Euphorbia lactea, ọtụtụ mgbe ‘Cristata’ dị iche iche, nke gbajiri agbaji buru ibu nke mebere ọfụma.
Mgbe ụfọdụ a na-akpọ osisi candelabra, osisi a na-akpọ candelabra, a na-akpọ euphorbia, ma ọ bụ a na-akpọ elkhorn, ọ na-adị ka coral a na-adịghị ahụkebe e jikọtara ọnụ. N'akụkụ nke akwụkwọ ahịhịa ahịhịa ahịhịa ahịhịa na ahịhịa nwere ike ịbụ odo odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha, odo, ma ọ bụ ọbara ọbara na agba, kwụ ọtọ n'elu ukwu.
Ọ dịkarịghị, ọ nwere ike ịmịpụta okooko osisi, ọ bụ ezie na nke a bụ ihe a na-adịghị ahụkebe na kacha mma. Ifuru coral cactus pere mpe ma o nweghi oke ile anya, mana o nwere ike buru pink ma obu odo odo na acha akwa ma oburu na ifuru aputa. Nke a na-eme na osisi ochie, mana ọ nweghị ike ime ma ọlị.
Ngwurugwu nke coral cactus na-egbu egbu ma nwee ike dị oke egwu. White na oké, a sap nwere ike ime ka akpụkpọ ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị ka dermatitis ma ọ bụ ndị ọzọ iyatesịt. Ọ bụrụ na ọ banye n'anya, ọ nwere ike ịkpata mgbakasị anya ma ọ bụ ọbụna ikpu ìsì nwa oge. N’agbụ ya, ọ na-ebute ọgbụgbọ ma ọ bụ agbọ agbọ.
Oge a ga-akpọ nkụ, mana ọ ka nwere ike ịbụ ihe mgbakasị ahụ. Ọ kachasị mma iji gloves mgbe niile mgbe ị na-emetụ osisi a aka, ma ọ bụrụ na ị ga-eburu ya, ma jide ite ahụ ma ọ bụ jiri ihe eji eme achịcha iji jiri nwayọ bulie ya na-enweghị ihe ọghọm na latex.
Dị ka ọtụtụ euphorbias, ma oghere na isi nwere ike ịnwe nkọ. Ndị ahụ nwekwara ike ịkpasu iwe, yabụ zere mmerụ ahụ n'aka ha!
Euphorbia neriifolia bụ ihe mgbọrọgwụ nkịtị maka coral cactus, ma na-etolite ọtụtụ epupụta na ya.
Ọ bụrụ na emesiri dị ka ọtụtụ cacti, kọral gị nwere ike ọ gaghị enwe ezigbo obi ụtọ n'ụlọ gị. Yabụ kedu ka ị si elekọta ihe a na-adịghị ahụkebe nke ahịhịa? Site na ịgwọ ya dị ka Euphorbia mishmash na ọ bụ, n'ezie!
Coral cactus nwere ike toro n'èzí kwa afọ na mpaghara 10-11, mana ekwesịrị ịkwaga n'ime ụlọ n'ime ọnwa oyi na mpaghara ndị ọzọ. Igwe na-eto eto kachasị mma maka osisi a dị n'etiti ogo 60-85.
Ọ bụ ezie na enwere ike itolite na ọnọdụ anyanwụ zuru oke, ebe ndị na-ekpo ọkụ kwesịrị ịhọrọ ndo na-enweghị atụ n'oge okpomọkụ nke ụbọchị iji zere ịba ọkụ na osisi. Ekwesiri ịmalite osisi ọhụrụ na ọnọdụ ndò dị nwayọ ma jiri nwayọ zụọ ya iji wee na -enwuwanye anwụ iji nye ya oge ịgbanwe.
Ọ bụrụ na etolite n’ime ụlọ, họrọ maka windo nke na-enye ezigbo ìhè anyanwụ n’oge opekata mpe awa 3-5 nke ụbọchị, ma gbanwee ya oge niile ka osisi gị ghara ịmalite itopụ n’akụkụ.
N'ikpeazụ, coral cactus adịghị oyi ma ọlị. Ọ dịghị amasị okpomọkụ nke na-agbadata n'okpuru 50, ma na-ahọrọ ịnọ na 60 na elu. Ọ bụrụ na ọnọdụ gị n’èzí amalite ịjụ oke oyi, weta ya n’ime ụlọ ka ihu igwe kporo ọkụ.
Dika ahihia nke nkpuru ahihia, coral cactus adighi na ntu oyi ma obu obu oyi - ya gha emebi ahihia nke osisi ma gbue ya!
Ọtụtụ succulents na cacti, iwu ọla edo ịgbaso bụ: 'mgbe enwere obi abụọ, emela mmiri'.
Otú ọ dị, ị ga-ahụ na coral kaktus bụ ntakịrị aghụghọ, ebe ọ na-adịghị anabata oke ọkọchị dị ka kaktus ga-eme. N'otu oge, osisi a kpọrọ asị nke ukwuu ịnọ n'ọnọdụ soggy. Ọ bụrụ na ala gị bụ oke mmiri mmiri, mmiri mmiri gị nwere ike ịmalite nsogbu dị ka ire ere.
Malite site na ịlele ala mmiri. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ nkụ n’elu sentimita abụọ ruo anọ nke ala gị, osisi nwere ike ịbụ akpịrị ịkpọ nkụ. Mmiri ala, ma ọ bụghị osisi ahụ ozugbo, ruo mgbe mmiri ga-apụ na isi ite ahụ.
Ọ bụrụ na kakpaus gị dị ka okirikiri ma ọ bụ wilted, ọ ga-abụ na mmiri adịghị n’okpuru. Nke a nwere ike ibute ihe mebiri emebi, ma ọ nwere ike ịmalite nsogbu fungal ma ọ bụ ire ere ma ọ bụrụ na ọ nọrọ n'ụzọ ahụ ogologo oge, yabụ ọ dị mkpa izere ọnọdụ a mgbe ọ bụla enwere ike.
-Ingụbiga mmiri ókè pụkwara ịbụ nsogbu, ebe ọ bụ na ájá nke na-adị ogologo mmiri ruo ogologo oge nwere ike ịkpata mgbọrọgwụ ma gbuo osisi gị. Na-enyocha ala tupu ịgbara mmiri!
Dị ka ọ na-adị, ọ ga-adị mkpa ka ị na-agba kakral kọral gị ọtụtụ mgbe n'oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị mgbe ọ na-eto eto. Oge mgbụsị akwụkwọ na oge udu mmiri na-ebelata oge ịgba mmiri, dịka osisi anaghị achọ nnukwu mmiri n'oge oge ndị ahụ n'afọ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị ntakịrị banyere oge ọ na-agba mmiri, ị ga-ahụ cactus gị coral na-enwe ọ humụ gburugburu ebe ahụ ma ọ bụrụhaala na ha nwere ezigbo ikuku. Nke a na-eme ka ha bụrụ ezigbo nwa akwukwo maka ime ụlọ griin haus ma ọ bụ na-eto eto n'ime ụlọ, mana lezie anya maka akara nke mildew powdery.
Kaktulu ahịhịa nwere inyoghi inyoghi.
Otutu umu euphorbia na acho ala cactus potting ma obu na ala ndi ozo di egwu nke oma. Ha na-enwe mmasị n’obere ihe a gwakọtara n’ime ebe a na-akụ ihe maka itinye nri na-edozi ahụ, mana ala cactus dị mfe na-arụ ọrụ nke ọma.
Coral cactus anaghị ahọrọ banyere ala pH larịị, ya mere ala nwere ike ịmalite site na ntakịrị acidic na obere alkaline na-enweghị ezigbo mgbanwe.
Ọtụtụ mgbe, a na-eji gravel gwakọta osisi ndị a dọbara n'ụlọ nkwakọba ihe, na mgbe ụfọdụ a na-agwakọta ya iji nyere aka ịkwado ntọala osisi ahụ na njem. Ọ bụ ezie na nke a agaghị emerụ osisi ahụ, ọ na-esiri ya ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na osisi ahụ chọrọ ịgbara mmiri.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmachị, ọ dị mfe iwepu gravel ọ bụla glued gburugburu osisi gị ma dochie ya ajịrịja ajịrịja ajị agba nke nwere ike ịmịpụ ya n’ụzọ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike wepu mulch ma ọlị, ma ọ bụrụ na ọ bụ osisi dị n'èzí, gravel mulch nwere ike igbochi ahịhịa na ihicha ala ngwa ngwa.
N'oge ọ na-eto n'oge opupu ihe ubi na ọkọchị, a ga-eme ka kọralị kọral gị na-amụba mgbe niile. Jiri fatịlaịza mmiri 10-10-10 nke etinyere na 1/4 nke ike mbụ ya (na-eme ka ọ bụrụ 2.5-2.5-2.5), na ifati kwa izu abụọ kachasị. Ọ nwere ike ịchọ obere ma ọ bụrụ na ị nwere ala bara ụba.
Zere fatịlaịza osisi gị n'oge oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi, ebe ọ naghị achọ nri agbakwunye na mgbe ahụ. Zerekwa ngwa ngwa-ịhapụ ma ọ bụ fatịlaịza granular, ebe ha nwere ike ibili megide mgbọrọgwụ nke euphorbia gị wee bute ọkụ nke osisi ahụ.
Formdị ọzọ euphorbia lactea, nke a na-ejikarị eme ihe dị ka coral cactus.
N'ozuzu, euphorbias na-agbasa site na cuttings tinye na mmiri gbanyere mkpọrọgwụ, na adịkarịghị mkpụrụ site na mkpụrụ. Ma ebe ọ bụ na cactus coral bụ osisi a nyadoro, ị nwere ike ịme karịa nke ha site na ịkpụzi, nke bụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya.
Bido site na ịhọrọ ezigbo Euphorbia neriifolia na Euphorbia lactea var. cristata na ịchọrọ ịrụ ọrụ. Plantsmụaka na-eto eto na-ewere usoro graffing dị mfe karịa ka ndị agadi na-eme.
Iji bulie, ọ na-enyere aka ma ọ bụrụ na ị na-ele anya n'ụdị crect nke lactea ma were ya chee ihu n'elu ntọala neriifolia. Chọta otu ụzọ nke yiri ka ọ ga-agakọ!
ebee ka m nwere ike zụta nkpuchi maka ọnụ
Ikwesiri igbutu udi V n'ime neriifolia, wepu uzo di elu nke ihe osisi ma na-ahapu oke nke akuku iji nyere aka kwado okpueze. Euphorbia lactea crest ga-achọ ụdị ịkpụcha ụdị akụ, na-agbatị elu site na ala nke crest iji daba nke ọma na neriifolia azu.
Jide n'aka na ị ga-egbutu iji hụ na nkedo siri ike nke na-enweghị oghere. Mepee oghere dị n’agbata osisi abụọ ahụ ga-ekwe ka sap pụọ ma nwee ike ime ka fungal rots mepụta.
Ozugbo i tinyechara okwukwe gị na V nke neriifolia, jiri wax grafting kpuchie elu niile na-esonye, ​​na-eme ka ha kaa akara ma dị ọcha. Kpachara anya n'oge usoro a iji zere ị nweta sap si na osisi ọ bụla na akpụkpọ gị. Na-etinye aka mgbe niile.
Jiri twine kee agwakọta njikọta anya ma nyere aka mee ka Franken-osisi dịrị ebe ahụ. Ọ ga-ewe izu abụọ nke 2-3 ka osisi abụọ ahụ wee jikọta ọnụ, ọ nwere ike iwe ogologo.
Mgbe izu 3 gasịrị, jiri nlezianya wepụ wax na grafting wax ma nyochaa nkwonkwo ahụ. Ọ bụrụ na ọ ka dị ka a ga - asị na ọ chọkwuru oge iji gwọọ ọnụ, tinye ihe ichoro ọhụrụ na ichere izu atọ ọzọ ma weghachite ejima ahụ ka ọ nọrọ na nchekwa Kpachara anya ka ị ghara imebi nkwonkwo gị!
Coral kaktus adịkarịghị aghọ rootbound n'ime ite. Mgbe izizi ị na-ebubata ụlọ a kụrụ akụ, ọ bụ ezi echiche ịpụta na uwe aka ma jiri nwayọ slide osisi ahụ na ite ya iji lelee. Ọ bụrụhaala na ọ bụghị rootbound, ọ kwesịrị inwe ike ibi n'ime ite ahụ ruo ogologo oge.
Ọ bụrụ na ọ na-egosi ihe ịrịba ama nke mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, ịnwere ike ịhọrọ ite dịtụ ntakịrị ma gbakwunye ya na nke ahụ, na-agbakwụnye mix cactus potting dị ka ọ dị mkpa. Jide n'aka na ite gị nwere ezigbo ọwara.
Imirikiti ahịhịa kaktus na-achọkarị ịmị na terracotta ma ọ bụ ite ndị ọzọ 'na-eku ume', nke na-enye ohere maka oke mmiri ọ bụla ịmịkọrọ. Na nwute, na ọnọdụ ọkụ nke a pụtakwara na ha nwere ike ihichapụ ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na ndị a bụ nnukwu ite maka ihe ọkụkụ gị, buru n’uche maka ọkwa mmiri ya.
N'ọtụtụ ọnọdụ, kọral kakral agaghị achọ ịkọ. Naanị na nke a bụ ma ọ bụrụ na kaktus amalite a fungal ire ere, na nke oge ọ nwere ike na-ama akaha.
Ero ero nwere ike ịdaba ma ọ bụ gbaa mkpọrọgwụ osisi ma ọ bụ mkpọrọgwụ ya. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ịrịba ama nke agba aja aja gị ma ọ bụ nro nro, nke a na-abụkarị ihe ngosi nke ire ere. Ọ bụrụ na ị kpachara anya, ị nwere ike oge ụfọdụ rụọ ọrụ ịwa ahụ na mgbochi iji wepụ ihe ndị fungal mebiri emebi nke dị n'akụkụ nsọtụ.
Ọ bụrụhaala na ị ga-enweta akụkụ niile nke mebiri emebi, osisi gị kwesịrị ịgbake. Jiri agụba na-enweghị isi, ma jiri uwe aka iji zere nke ọ bụla nke latex na-egbu egbu na akpụkpọ gị. Ikwesighi ikpuchi elu elu a na-egbutu, dị ka latex osisi ahụ na-emepụta ga-emepụta skaab ya ka ọ na-agba.
A coral kaktus na a nnọọ anya aka nkwonkwo onya.
N'agbanyeghị na ọ bụ ntakịrị ihe ọhụụ na mmalite ya, osisi ndị a anaghị enwekarị nsogbu dị ukwuu. Ole na ole nwere ike igbu m ga-akọwa n'okpuru!
Kọlọk gị nwere ike ịtụgharị. Verlaghachi azụ bụ mgbe Euphorbia neriifolia rootstock kpebiri na ọ chọrọ ịnwale ịmaliteghachi dị ka neriifolia, na -emepụta mkpịsị ụkwụ nke abụọ ma ọ bụ osisi nke na-agbapụta n'akụkụ okpueze lactea.
Ọ bụrụ na nke a emee, ị ga-ahọrọ n'etiti ịhapụ ya na ịnwe osisi pụrụ iche karịa, ma ọ bụ wepụ ya nke ọma n'akụkụ eriri wee kwe ka latex na-akọ akụkụ ya. Okwesighi imebi okpueze ahụ n'ụzọ ọ bụla.
A naghị egbochi coral cactus ọtụtụ pests, ebe latex na-egbochi ya. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ole na ole nwere ike ịdaba na osisi gị.
Mealybugs na ndi ozo ọnụ ọgụgụ ụmụ ahụhụ adịghị iche na succulents, ha na-aga ọtụtụ ụdị. Zere iji ncha nke ahụhụ na euphorbias gị n'ihi na ọ nwere ike imebi ihe ọkụkụ. Kama, were owu e tinyere na ya tinye ya mmanya na-egbu egbu iji wepụ pests ndị a.
Rịba ama: ọ bụrụ na ị na-a alcoholụ mmanya na-egbu egbu dị ka nke a, ọ kachasị mma iji 70% na-egbu mmanya ka ọ na-agbanyekwu ntakịrị. Ike mmanya na-abawanye elu nwere ike ime ka mpụta nke mpụga nke ahịhịa.
Ududo mites nwekwara ike iputa na coral kaktus. Ebe ọ bụ na ncha nke ahụhụ enweghị nhọrọ, jiri a ịgba ịgba mmiri iji wepụ nsị ududo na àkwá ha, ma kwe ka osisi ahụ kpoo kpamkpam n'elu. Nwekwara ike iji nke ukwuu-diluted were mmanu .
Njirimara akara akara nke latex sap ga-egbochi ọtụtụ ọrịa na osisi ka ọ na-ata. Ọ nwere ụfọdụ eke nwayọọ fungicidal uru dị ka nke ọma. Agbanyeghị, enwere nsogbu di na nwunye nwere ike ibilite.
Powdery ebu , ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe omimi, nwere ike ime ma ọ bụrụ na osisi gị nọ na ọnọdụ iru mmiri na-ebelata ikuku. Ọ kachasị mma iji zere ọnọdụ ndị nwere ike ime ka mmiri nwee ntụ, dịka ụfọdụ fungicides ga-emebi ahịhịa coral cactus.
Ọ bụrụ na ebu-ehicha na-apụta, gbanye otu ngaji nke ntụ iji koo achịcha n'ime galọn mmiri. Nwere ike iji nke ahụ gwọọ ihe ọkụkụ.
Mgbọrọgwụ ire ere nwere ike ịzụlite ma ọ bụrụ na ala dị oke mmiri maka osisi gị. Iji zere nke a, gbaa mbọ jiri cactus ọkpụite gwakọtara ma ghara imechi mmiri. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịnapụta coral cactus nke na-ata ahụhụ site na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, ebe ọ bụ na a na-ahụkarị mmebi ahụ tupu osisi ahụ egosi mmebi.
Fungal rots nwekwara ike ịzụlite na epupụta nke osisi gị ma ọ bụrụ na oyi emebi ya. Nke a na-egosipụtakarị browned na mushy akụkụ nke epupụta. Dị ka akọwara na nke kwachaa nke dị n'elu, ị nwere ike iwepu oke nke mebiri emebi n'akụkụ nke epupụta.
Osisi a nyadoro aghaghi ibu nnukwu anu ma obu anumanu. N'ezie, o yikarịrị ka ọ ga-abụ ihe ọ bụla karịa ịma mma n'ụlọ gị ma ọ bụ n'ubi gị! Grown torola murtik tupu mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ dị, ị nwere nsogbu ọ bụla? Kekọrịta nsogbu coral cactus gị na ngalaba nkọwa!
esi họrọ agba nkuanya
esi eto ntutu n'ezie ngwa ngwa
polyamory ihe ndị enyi m chere na m na -eme
Uwe a ga -eyi maka agbamakwụkwọ oge ọkọchị 2021